Ogaden News Agency (ONA) – Aftonbladet – Maxkamad Sweden ah oo ku eedeysay Cabdi iley dambiyo khatar ah
Aftonbladet – Maxkamad Sweden ah oo ku eedeysay Cabdi iley dambiyo khatar ah
Wargayska caanka ah ee Aftonbladet oo ka soo baxa dalka Sweden ayaa shaaca ka qaaday inay maxkamad ku taala dalkaasi eegeyso dambiyo ka dhan xuquuqda aadanaha oo lagu soo eedeeyay gacan-ku-dhiigle Cabdi iley iyo ku xigeenkiisa Cabdulaahi weerar. Waxay Jariidadata qortay in labadaa nin loo haysto dambiyo khatar ah oo ka soo horjeeda xuquuqda aadanaha. (Halkan Guji)
Dambiyada lagu soo oogay ayay sheegtay Aftonbladet in laga daawday cajalado laga soo qaaday gudaha Ogadenya oo hadda yaala dalka Sweden.
Waxaa kaloo filimka laga daawaday dil beenaad lagu argagiyay labadi wariye ay qabteen Martin Schibbye iyo Johan Persson. Waxay kaloo qortay jariidada in laga daawaday filimka cadaymo muujinaya jidh dil iyo dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Stellan Garde oo ah xeer-ilaaliyaha dawlada ayaa sheegay inay raja weyn ka qabaan inuu socon doono kiiska lagu soo oogay dambiilayaasha. Wuxuu yidhi; “Waxay u badantahay in kooxdan ay ku dhaceen dabinkii. Xiisaha kalee ay qadiyadan leedahay waxaa weeyeinay xukuumadda tahay midda soo bandhigtay.”
Maalinta Jimcaha ayuu xafiiska Xeer-ilaliyaha Qaranka ee Stockholm go’aanka kama dambaysta ah ku dhawaaqi doonaa.